World Telecommunication day / World Hypertension Day | विश्व दूरसञ्चार दिवस / विश्व उच्च रक्तचाप दिवस | २०७८ जेठ ३ | Hamro Patro
हेल्लो हेल्लो, आउनुहोस् आजको कुराकानी हेल्लोबाटै शुरु गरौँ । हुन्न र ? विश्वमा सबैभन्दा बढी बोलिने शब्द हो, ‘हेल्लो ।’ के गाउँ, के शहर ? सबैतिर हेल्लो नबोल्ने कोही छैन । हेल्लो आजको नारा हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमले घरभित्र बसेका मानिसहरू । उनीहरू कहिले मोबाइलमा, त कहिले मेसेन्जरमा आउने कलहरूमा हेल्लो गर्दै बसेका छन् । अस्पतालको शैयाको उपलब्धतादेखि भेन्टिलेटरको अवस्था, डाक्टरको परामर्शदेखि परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यसम्म घरै बसी बसी बुझ्न सम्भव भएको छ ।
फोन अर्थात् दूराभाष यन्त्रको आविष्कारसँगसँगै हेल्लो शब्दले एउटा विश्वब्यापी आकार पायो । अनि सबैतिर गुञ्जियो हेल्लो, के छ ? हेल्लो नमस्ते । सञ्चै आदि इत्यादि हेल्लोका त्यान्द्रा–म्यान्द्राहरू ।
फोन अथवा दूरसञ्चारको गहकिलो साधन, कर्ण फुसफुस, फोनबाजा या अन्य धेरै नामले परिचित पनि । हो, यसै फोनका जन्मदाता वैज्ञानिक ग्राहम बेल हुन् । तथापि हेल्लो शब्दको आविष्कार या शुरुवाती श्रेय चाहिँ अर्का महान वैज्ञानिक थोमस एडिसनलाई जान्छ भन्ने तर्कहरू छन् ।
अब गएको शताब्दीको कुरा न हो । कतिले भने ग्राहमबेल कि प्रेमिकाको नाम हेल्लो भएकाले उनले यस नामलाई फोनको सम्बोधनमार्फत् संसारभरि अमर बनाउन हल्लो नामको प्रयोग गरेको बताउँछन् । कुरा जे होस्, तर आजको युग मोबाइल फोन, इन्टरनेट अनि अन्य सञ्चारका साधनहरूको युग हो जहाँ एउटा क्लिकमा संसार उपलब्ध छ ।
पुराणहरूमा कल्प वृक्षको अवधारणा छ । यस्तो वृक्ष जसले हरेक मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छ त्यसलाई कल्प–वृक्ष भनिन्छ । यसअर्थमा सञ्चारको युगले पनि इ्न्टरनेट रूपी कल्पवृक्ष पाएको छ । अनि विभिन्न ग्याजेटहरू प्रयोगले हामी स्वतन्त्र इन्टरनेट संसारमा विचरण गर्दछौँ । हैन त ? दूरसञ्चार अर्थात परपरसम्म सञ्चार गर्ने प्रविधिको यो युगान्तकारी परिवर्तन १९औँ शताब्दीको अन्त्यबाट अझ धेरै प्रगतिउन्मुख भएको हो ।
नत्र हाम्रै समाजमा शनिवारको दिन एकफेर एक कल फोन गर्न पालो कुरेर बस्ने चलन थियो । अनि मानिस बोलाउन पनि मानिस पठाउनुपथ्र्यो । अनि महिनाँै लगाएर डाँक सेवामार्फत्, हुलाकमार्फत् चिठी पठाएका, आकाशवाणीमार्फत् सन्देश पठाएका र पाएका पुस्ताहरू जीवितै छन् ।
त्यति धेरै पुराना कुरा पनि पल्टाउन पर्दैन, किनभने सामान्य मोबाइलको सिम लिन रातभरि जाग्राम बसेका हामीमध्य धेरै छौ । धेरै पछिसम्म पनि मोबाइलको रोमिङ्ग शुल्क तिर्नुपथ्र्याे, यदि एक क्षेत्रको मोबाइल अर्को क्षेत्रका लगिएमा ।
थोरै नेपाली दूरसञ्चार इतिहासका पानाहरू प्रस्तुत गर्न चाह्याँै । सन् १९१३ मा पहिलो पटक काठमाडौंमा टेलिफोन लाइन जोडिएकोमा एक वर्षपछि सन् १९१४ मा काठमाडौंदेखि भारतको रक्सौलसम्म टेलिफोनको प्रयोजनका लागि तार लाइन जडान गरिएको थियो ।
हरेक कुराका आफ्नै सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् । समुन्द्र पारिबाट हरेक दिन फोनमा कुरा गरेपनि घरको तिर्सना उत्तिकै हुने गर्दछ । बिरामी पर्दा फोन या भिडियोमार्फत् स्नेहमयी आवाज भन्दा न्यानो हातको स्पर्शको महत्व धेरै हुन्छ । मानवीय स्वभाव नै स्पर्श अनि निकटताको पेरिफेरिमा रमेको हुन्छ । जुन भौतिक उपस्थितिलाई दुरसञ्चारका आयामहरूले प्रतिस्थापित गर्न सक्दैनन् ।
आउँदा पुस्ताहरू खेल मैदानको खेल भन्दा मोबाइल गेम र भिडियोमा नै धेरै ब्यस्त त भएका छैनन् ? फेसबुकमा जन्मदिनको ओहिरो लाग्दा जन्म दिनकै दिन भेटेर अँगालो हालेर शुभकामना दिने मान्छे कत्तिका छन् ?
यथार्थ र ‘भर्चुअल’ कुराहरूबीचको सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । इन्टरनेटमा च्याट भएकै हिसाबले फोटो हेरेकै भरमा प्रेममा पर्नु नराम्रो त हैन । तर देख्दै नदेखी क्यामराको लेन्स र इन्टरनेटको प्रतिलिपिहरूमा विश्वास गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ, अन्वेषण जरुरी छ ।
दूरसञ्चार दिवसले मानवताका यी आयामहरू पहिचान गरोस् । समाजलाई गज्जबको ‘च्याट’ गर्ने हैन सहृदय बोल्न सक्ने मानिसको पनि उत्तिकै खाँचो छ । पोष्ट शेयर मात्र हैन पिडा र खुशी शेयर गर्ने मित्रको खाँचो छ । फेसबुक या यूट्यूबका पेज मात्र नभई सबै जना बसेर चिया खाने र गफ गर्ने पाटीहरू पनि चाहिएको छ ।
सन् २०२१ को दूरसञ्चार दिवसको नारा नै Transformation In challenging times अर्थात् चुनौतिपूर्ण समयमा गर्नुपर्ने रूपान्तरण भन्ने राखिएको छ । दूरसञ्चारले सहज पारेको जीवन–शैलीको आत्मसाथ गर्दै थप चाहिने रूपान्तरणको पैरवी गरेको हो ।
दुरसञ्चार दिवस अनि सूचना प्रविधि समाज दिवसको शुभकामना !
ल है आज त लामै कुरा हुने भयो हाम्रो । आउनुहोस् आज कुरा गरौँ अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण दिवसको, जुन विश्व समुदायले हरेक वर्षको मे १७ तारिखकै दिन साँचेर मनाउँछन् ।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस । सामान्यतया ‘हाई ब्लडप्रेशर’ भन्छौँ, हामी जसले धेरै जनाको शरीरमा धेरै खति गरेको छ विश्वभरि नै ।
अझ कोरोना भाइरस सन्त्रासको समयमा त तनाव र सीमितताले गर्दा उच्च रक्तचापको जोखिम झनै बढेको छ । सबैजनाले समयसमयमा रक्तचाप मापन गर्नुपर्ने जरुरतलाई पैरवी गर्दै यसवर्ष अर्थात सन् २०२१ को नारा नै भएको छ ,'Measure your blood pressure accurately' ।
उच्च रक्तचापलाई ‘हाइपरटेन्सन’ पनि भनिन्छ । सन् २००५ बाट यो दिन मनाउन शुरु गरिएको हो । बदलिँदो जीवनशैली, प्याकेटका खानेकुरा, प्रशोधित पदार्थ, ब्यस्त जीवनशैली अनि चाहनाहरूको गुणन गर्ने र नचाहिँदो सम्पत्ति र प्रगतिको प्रतिस्पर्धाले मानिसलाई ‘हाइपरटेन्सीभ’ बनाउँदैछ । हामीसबै सतर्क हुन जरुरी छ ।
हरेक दिन मधुशालामा छिर्न सक्ने मानिस बिहान उठेर केही समय ब्यायाम गर्न भ्याउँदैनन् । साना ठूला सबैलाई सामान्य घरको खानेकुरा भन्दा बाहिरका खानेकुराहरू र प्याकेटका खाने चिजमा लत बसेको छ । अनि मनभित्र छँदैछ, जीवनमा नचाहिँदा तनावहरू । हामी सबै ‘हाइपरटेन्सन’कै जोखिममा छौं ।
आजको दिन थोरै समय निकालेर एकफेर ‘ब्लडप्रेशर’ जचाउने पो हो कि ? स्मरणरहोस् हृदय रोगका कारक तत्वहरूमा रक्तचाप उच्च हुनु महत्वपूर्ण र भयानक कारण मानिन्छक । यसका कारण मृगौलाका रोगहरू, थाइरायडका समस्या अनि विभिन्न नशाजन्य रोगहरू पनि लाग्छन् ।
रक्तचापको एउटा निर्धारित चाप छ, त्यसमा बढी र गलत दुवै हानिकारक हो । यसैकारण यस वर्षको ‘हाइपरटेन्सन’ दिवसको नारा नै आफ्नो नम्बर पत्ता लगाउ भन्ने छ । अर्थात् आफ्नो रक्तचापको जाँच गराएर नम्बर पत्ता लगाउन फेरि सबैलाई आग्रह ।